Haiady taekwondo :: Hanana solontena amin’ny « Mondial » ampitain-davitra i Madagasikara • AoRaha
Hotanterahina voalohany, amin’ny 25 jolay 2020, ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany amin’ny fihetsika mirindra na Tul ho an’ny haiady taekwondo ITF. Isan’ireo handray anjara amin’izany hetsika maneran-tany ampitaindavitra amin’ny alalan’ny horonantsary andiany voalohany izany i Madagasikara, araka ny nambaran’ny avy ao amin’ny Federasiona malagasy.
Nanomboka tamin’ny 1 jona ka hatramin’ny 19 jolay ho avy izao no fotoana handefasana an’ireo horonantsary mirakitra ny fihetsika mirindran’ny mpifaninana. « Misokatra ho an’ny mpikatroka maneran-tany ny fifaninanana. Azo atao ny misoratra anarana manokana sy amin’ny alalan’ny klioba na amin’ny fikambanana, izay mifandray amin’ny rafitra iraisam-pirenena », araka ny hita ao amin’ny fanambaràn’ny Federasiona iraisam-pirenen’ny haiady taekwondo ITF. Efa tamin’ny fiandohan’ny volana mey no nampahafantatra an’ity fifaninanana ity izy ireo, saingy tsy mbola ofisialy.
Hozaraina vondrona roa ireo mpifaninana ka sokajiana ao amin’ny « Open Juniors » ireo eo anelanelan’ ny 5 hatramin’ny 17 taona. Hiray vondrona kosa ireo tanora sy zokiny manana ny tepana mavo « 8e Kup » hatramin’ny tepana mainty « 6e Dan ». Mbola tsy voafaritra mazava ireo hisolo tena an’i Madagasikara amin’io fifaninanana maneran-tany ampitain-davitra io.
Governemanta :: Noesorina teo amin’ny toerany ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena